James Milner oo shaaca ka qaaday hadalladii kulalaa ee xiisaha lahaa ee dhex maray isaga Lionel Messi – Gool FM
(Yurub) 26 Maajo 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England James Milner ayaa ka hadllay kulankii taariikhiga ahaa ay koodiisa Liverpool kula ciyaartay Barcelona wareega afar dhamaadka tartanka Champions League.
James Milner ayaa sidoo kale ka hadlay sheeko kulul ee ku dhex martay isaga iyo Lionel Messi inta u dhaxeesay labada qeyb ciyaartii ka dhacday garoonka Cump Nou.
James Milner ayaa si kulul u raacday Lionel Messi dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta kulankii lugta hore, taasoo ay xitaa si cad uga soo hor jeesteen ciyaartoyda kooxda Barcelona ee ku sugneyd gudaha garoonka, wuxuuna isqab qabsiga labada dhinac uu sii jiray inta loo socday tunnelka qolka labiska.
Hadaba James Milner ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga warbixiyay, hadaladii ay Messi isku dhaafsadeen gudaha tunnelka garoonka wuxuuna yiri:
“Ma uusan ku faraxsaneyn kaddib qaabkii aan u raacday isaga, wuxuu igula hadlayey luqada Isbanishka ah inta lagu sii socday tunnelka wuxuu igu yiri dameer, taasoo ay u adeegsadaan shaqsiyaadka dadka laada”.
“Waxaan u sheegay, ma wanaagsan tahay? Wuxuu igu yiri waad i garaacday, sababtoo ah waxaan kubadda dhex mariyey labadaada lugood dhexdooda mar hore”.
“Waxa uu sameeyay kulankiisii lugta hore, mar walba ayuu sameeyaa, wayna adag tahay inaad ka hor timaado Lionel Messi, waa ciyaaryahan ka yimid duunyo kale”.